मंसिरमा बाजा बज्न थालेपछि विवाह गरुँ–गरुँ जस्तो लाग्छ हो ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः मंसिर ३, २०७४ - साप्ताहिक
त्यो त कात्तिकमा पनि लाग्छ होला नि । माया र विवाह गर्ने मन सबैमा हुन्छ, तर धेरैले अप्ठेरो मान्छन् अनि भन्छन्–‘मायाले संसार थाम्दैन ।’
विवाह योग्यहरूका लागि त काउकुती नै लाग्दो हो । प्रेममा परेका जोडीहरू पुलकित हुन्छन् होला । यो मंसिर नै यस्तो महिना हो, जसले विवाह भैसकेकाहरूलाई पनि फेरि विवाह गरुँ–गरुँ बनाइदिन्छ । उमेर नपुगेकाहरूलाई पनि छटपटी हुन्छ । बाजा बज्न थालेपछि त हरेक मंसिरमा विवाह गरुँ–गरुँ जस्तो लागेर आउँछ ।
बाजा बजेकै भरमा विवाह गर्न मन लाग्ने भए त समाजमा बेहुलाका लागि बेहुली र बेहुलीका लागि बेहुला नै कम हुँदै जालान् नि ।
जतिन ताम्राकार, अभिनेता
आफूलाई त १२ वर्षअघि त्यस्तो लाग्थ्यो । अब त लाग्न छोड्यो ।
अरूको बिहे देख्दा, आफूलाई त्यो स्थानमा राखेर कल्पना गर्दा लाज पो लागेर आउँछ त । यो मंसिरमा बाजा बजाएर विवाह गर्ने जति सबैलाई शुभकामना ।
मिलन सुर्खेती, गायक
लाग्छ नि, तर फेरि जिन्दगी भर आफ्नै बाजा बजिरहन्छ भन्ने डरले अरूको बिहेको बाजाको तालमा नाचेरै चित्त बुझाउँछु ।
कमल प्यासी देवकोटा, नाट्यकर्मी
अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन । मंसिर लागेपछि भन्न सकिन्न ।
सुरेन बसेल, नृत्य निर्देशक
हो नि, ममा पनि बेहुली हुने रहर छ । कसलाई पो हुन्न र यो रहर ? बाजा बजेको सुनेपछि अवश्य ध्यान त्यतातिर तानिन्छ ।
खोई मेरो त उमेर नै पुगेको छैन, त्यसैले होला मलाई चाहिँ लागेको छैन । फेरि केटा पाउनुपर्‍यो, साइत जुर्नु पर्‍यो । बरु यसपालि अरूको बिहे खाने रहर छ ।
फेरि त्यो दिन सम्झन्न चाहन्न त्यही कथा म दोहोर्‍याउन चाहन्न ।
बाजा बजेको सुन्दैमा बिहे गर्ने रहर हुने भए, के श्रवणशक्ति गुमाएका सबै जति अविवाहित छन् त ? बाजा बज्दैमा बिहे गरौ–गरौं लाग्ने भए प्रत्येक मंसिरमा हरेकले बिहे गरिरहन्थे । बिहे गर्न बाजा बजेर मात्र पुग्दैन, मन मिल्नुपर्छ ।
उत्सव रसाइली, सञ्चारकर्मी
धेरै पहिले पञ्चेबाजा बजेको सुनेपछि बिहे गरिहालुँ जस्तो लाग्थ्यो, तर अचेल भने महँगीले गर्दा बाजा नबजाई सुटुक्क बिहे गर्नुपर्ला भन्ने सोच्दैछु ।
अविवाहितहरूलाई लाग्छ होला । विवाहितहरू त बाजा बजेको आवाज सुन्ने बित्तिकै तर्सिन्छन् बाबै ।
नीराजन लुइँटेल, अभिनेता
मलाई त लाग्दैन । म चाहिँ यो महिना कतिवटा बिहेभोज खान पाइने हो ? कहाँ बढी रमाइलो हुने हो ? भन्ने सोच्न थाल्छु ।
पृथक आचार्य, गायक
मलाई चाहिँ लाग्दैन, तर कसैको स्मार्ट, ट्यालेन्टेड अनि क्युट बच्चा देख्दा रहर लागे जस्तो हुन्छ ।
मैले धेरै विवाहमा म्युजिक बजाएँ, त्यसमा सबैभन्दा खुसी त्यही दिन बिहे गर्ने जोडी मात्र हुन्छन् ।
मलाई त लाग्दैन, सम्भवत: विवाहका बारेमा सोच्दै नसोचेको भएर होला, तर अरूको बिहेमा चाहिँ जान मनलाग्छ ।
विवाह नगरेकाहरूलाई लाग्छ होला, गरेकाहरू त तर्सिन्छन् ।
समरा लामा, मेकअप आर्टिस्ट
खोई अहिलेसम्म त लागेको छैन । अब यो पाली चाहिँ ध्यान दिएर पञ्चे बाजा सुन्नुपर्ला ?
सुवास कोइराला, निर्देशक
आफ्ना सबै साथीहरूको बिहे भैसक्यो, त्यसैले पनि होला आफूलाई चाहिँ बिहे गरुँ–गरुँ जस्तो लाग्छ । बरु जुरेको पो छैन ।
आमिर शेख, मोडल/गायक
खोई, मलाई त बिहे गर्ने समय नभएकाले होला केही फिल नै हुँदैन ।
सोरु बराइली, मोडल
मंसिरमा यसपाली बिहे गरिन्छ भन्ने चलन पुरानै हो, त्यसमा पनि बाजा नै बजेपछि त विवाह गरुँ–गरुँ लाग्दो हो । मंसिर लाग्दैमा, बाजा बज्दैमा हतारिएर विवाह गर्नुभन्दा सोचेर विचारेर निर्णय गरे राम्रो होला ।
महेश लिम्बू, आर जे, रेडियो कान्तिपुर
शत प्रतिशत लाग्छ नि । आफूभन्दा जेठीलाई विवाह गरुँभन्दा म त तिम्री दिदी जस्तो भनिदिन्छे । कान्छीसँग सोध्यो भने म त हजुरकी बहिनी भन्छे । एकै दिन एकै समयमा जन्मिएकी कहाँ खोजँु प्रभु ?
आमिर बज्राचार्य, अभिनेता
माहौल नै त्यस्तै हुन्छ, त्यसैले मलाई मात्र होइन, म जस्ता अविवाहित धेरैलाई हुन्छ त्यस्तो ।
त्यस्तो त लाग्दैन, तर कतै मेरी गर्लफ्रेण्डको बिहे त भएन भनेर धेरैलाई तनाव चैं हुन्छ होला ।
हरिहर अधिकारी, ज्योतिष
मंसिरमै मात्र लाग्दैन । पाए त म जहिले पनि बिहे गर्न तयार ।
सोच त आउँछ, तर कोसँग गर्ने ?
सुजना ढकाल, अभिनेत्री